Maxkamada Gobolka Bari ayaa ku riday xukun dil ah haweeney lagu eedeeyey in ay xaday… – Hagaag.com
Maxkamada Gobolka Bari ayaa ku riday xukun dil ah haweeney lagu eedeeyey in ay xaday…
Posted on 4 Juunyo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Maxkamadda Darjada 1-aad ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah xukun dil ah ku riday haweeney lagu eedeeyay in ay xaday gabar yar kuna geeriyootay gurigeeda.
Baaritaano kadib ayaa maxkamada ku heshay Ruqiyo Cabdiraxmaan Maxamed in ay xaday gabar yar oo sanad jir aheyd taa oo markii dambe ku geeriyootay guriga ay degneyd haweeneydan xatooyada geysatay.
Guddoomiyaha Maxkamadda gobolka Bari Abuukar Cabdinuur Jaamac ayaa sheegay in eedaysane Ruqiyo ay qiratay dambiga lagu soo oogay ee ah in ay xadday gabar sannad jir ahayd taasi oo gurigeeda ku dhimatay, waxa uuna cadeeyay in lagu riday xukun dil ah.
Maxkamada darajada 1-aad ee gobolka Bari ayaa sidoo kale 3-sano oo xabsi ah ku riday ninka qabay haweeneyda dilka lagu xukumay, waxaana lamaanayaashan xukunada lagu riday racfaan ugu qaadan karaan mudo 30-cisho ah.
Haweeneydan cunugta yar xaday kadibna gurigeeda ku dhax geeriyootay gabadha yar ayaa hadal heyn badan ka abuurtay magaalada Boosaaso, waxaana dadka magaaladaasi maanta aragtiyo kala duwan ka dhiibteen xukunkan lagu riday haweeneydan .